ဘုန်းကျော်: 04/01/2011 - 05/01/2011
ကိုအောင်မျိုးမင်းရဲ့ တုန့် ပြန်ချက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အတောအတွင်းမှာ ဟိုလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုအောင်မျိုးမင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဟုတ်မဟုတ်၊ သူ့ ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကို မေးခဲ့တယ်။ သူ့ အနေနဲ့ သတင်းမှားနေကြောင်း၊ ဘာမှတုန့်ပြန်စရာမလိုကြောင်းပြောပါတယ်။ အရက်သောက်နေစဉ်အတွင်း အိန္ဒိယရဲတွေက ဆူညံလို့ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း။ လူမြင်ကွင်းတွင် ဟိုဟာလုပ်တာ မဟုတ်ကြောင်း။ ဟိုဟာလုပ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း။ လူတွေအများကြီးနဲ့ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း...တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းတွေကို ချဲ့ ကားထားကြောင်း သိရပါသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, April 27, 2011
ကိုကျော်ဝင်း (အယ်ဒီတာ လမ်းသစ်ဂျာနယ်) မလေးရှား
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, April 26, 2011
ဆိုင်းဘာဘာက မျည့်လှည့်ဆရာလား၊ တန်ခိုးရှင်လား
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, April 25, 2011
ဘီဘီစီ ဦးသန်းရဲ့ သတင်းတွေ လံကြုပ်,တွေဖြစ်သည်
BBC Burmese Web
ကျနော် ဦးသန်းရဲ့ သတင်းတွေကို အရမ်းသံသယဖြစ်မိတယ်။ တပ်ထဲက သတင်းတွေတက်လာတိုင်း စစ်နက်လက်နက်ညွှန်ကြားရေးမှုးရုံး လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတရင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး အမြဲတမ်းမေးခဲ့တယ်။ တပ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း တပ်တိုင်းကိုကြေးနန်းဝင်ကြောင်း၊ သူတို့လည်း သိကြောင်းပြောပါတယ်။
တပ်ထဲမှာ ကြီးလာတဲ့လူဆိုတော့ တပ်ထဲကကိစ္စတွေကို သိချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်အမြဲတမ်းလှမ်းမေးတယ်။ နောက်ပြီးတပ်နာမည်တွေလဲ လွဲနေတယ်။ ဥပမာ ဦးသန်းက ပင်မစစ်လက်နက်ခဲယမ်းမီး ကျောက်သိုလှောင်ရေးတပ်လို့သုံးတယ်။ ကျနော်သိသလောက် ဒီတပ်ရဲ့ နာမည်က ပင်မခဲယမ်းမီးကျောက်တပ် (ပခန) လို့ခေါ်တယ်။ အခုပြောင်းသွာရင်တော့ မသိတော့ပါဘူး။
သံသယဖြစ်မိတာ ဒီလိုပါ။ ဦးသန်းဟာ တပ်တွင်းအဖြစ်အပျက်တွေကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး သတင်းယူတဲ့လူမဟုတ်ပါ။ တပ်တွင်းရဲဘော်တစ်ဦးရဲ့ အသံတွေကို ကိုးကားပြီးသတင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလူကကော ဘယ်လောက်ထိယုံစရာကောင်းလဲ။ သူက ဦးသန်း သတင်းယူဖို့လွှတ်ထားတဲ့ လူ,မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဒီလူက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။ နအဖ လူလား။ ကွန်ပြူတာနဲ့စစ်လို့ရတာမဟုတ်ပါ။
မျိုးချစ်တပ်မတော်ကွန်ယက်အဖွဲ့ကိစ္စလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ယူဂျီလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်သူတို့ လုပ်ကြံပြီး ဘီဘီစီကို အသုံးချလေတယ်လို့မြင်မိတယ်။ ဘီဘီစီကလည်း သိရက်နဲ့ တင်ပေးတာလားမသိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးသန်းကတော့ သတင်းတပုဒ်တက်တိုင်း စတာလင်ပေါင် ရပါ၏။
မီဒီယာနဲ့ ဆိုက်ဝါးလုပ်တဲ့ လူတွေကို သတိပေးချင်တယ်။ ဒီလိုကောလဟလတွေလုပ်ရင် မီဒီယာနဲ့ အတိုက်အခံကို ပိုပြီးအထင်သေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်မှု မလိုချင်ရင်တော့ ဆက်လုပ်ကြပေါ့။
နေမင်းသူ- 25/,Apr, 2011
ခုတလော ဘီဘီစီသတင်းဌာနမှာ ဆက်တိုက်လိုလိုလွှင့်နေတဲ့ တပ်တွင်းပစ်ခတ်မှုသတင်းတွေ၊ မျိုးချစ်တပ်မတော် ကွန်ရက် ဆိုတဲ့သတင်းတွေ တကယ်မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ သေသေချာချာဆန်းစစ်ဝေဖန် ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသင့်ပါတယ်။
သတင်းထောက်ဦးသန်းရဲ့ ပေးပို့ချက်တွေက အချက်အလက်တော်တော်လွဲနေတယ်။
ကျနော်ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာ အကြာကြီးနေခဲ့တာ။ သူပြောတဲ့သတင်းအရ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဘာမှဖြစ်တာ မတွေ့ရဘူး။
နောက်ပြီးသူ့သတင်းတွေမှာ ဘယ်သူကသတင်းပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း တိတိကျကျ ဖော်ထုတ် ထားတာမရှိဘူး။ (သက်ဆိုင်ရာသတင်းပေးသူရဲ့ လုံခြုံရေးအရ အကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ပါ တယ်။)
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ အထောက်အထားဘယ်လောက်ခိုင်မာသလဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရော ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
နောက်ပြီး တပ်တွင်းတောင်းဆိုချက်တွေကလည်း နိုင်ငံရေးဆန်ဆန် အချက်အလက်တွေ၊ စစ်တပ်ထဲမှာ ဒီလိုတောင်းဆိုချက်ကို တပ်ရင်းမှူးကိုယ်တိုင်ကလက်ခံပြီး တိုင်မှူးဆီကိုတင်တယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည် တွေမှာတောင် မလွယ်တဲ့ ကိစ္စ။
နောက် မျိုးချစ်တပ်မတော်ကွန်ရက်ဖွဲ့တယ် ဆိုတာက ပိုပြီး ယုတ္တိမတန် ဖြစ်နေတယ်။ တပ်တွင်း အာဏာသိမ်း ပုန်ကန်ဖို့ အထိ ရည်ရွယ်တဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ တပ်တွင်းကွန်ရက်အဖွဲ့ကြီးကို တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ယောက်က လွယ်လွယ်နဲ့ သိနိုင်ပါ့မလား။
ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်တို့လက်ထက်ကတောင် ခုလောက်ထိ လျှို့ဝှက်မှုလျော့လျော့ရဲရဲမရှိခဲ့ပါဘူး။
နောက်အဲဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန်တို့လည်း သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတာပဲ။
ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ၊မရှိ စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။
ကျနော့အမြင်ပြောရရင် ဒီလောက်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ တကယ့်လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားမှုကို မီဒီယာက အရင်ဆုံးသိတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပိုပြီးသိုသိုသိပ်သိပ် နေကြရတာ။
ဒါဆိုရင် ဒီသတင်းကြီးက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တဲ့ “ဆိုက်ဝါးလံကြုပ်” ဆိုတာသေချာသွားပြီ။ အကျိုးဆက် ကရော ဘာတွေဖြစ်လာ နိုင်မလဲ။
သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က အချင်းချင်းတွေသံသယဖြစ် မီဒီယာတွေ လည်းသိက္ခာကျ နောက်ဆုံးမှာ သူ့မယုံ ကိုယ့်မယုံနဲ့ ဟင်္သာကိုးသောင်း ဇာတ်ခင်းစေချင်တာလား မသိ။
ကျနော်မြင်တာကတော့ ဆိုက်ဝါးဆိုတာ လှုပ်ရှားမှုနဲ့အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်တဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေတယ်။
၁၉၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံအတွင်းက အင်းယားကန်ဘောင်ကိစ္စ၊ ရေတပ်နဲ့လေတပ်က စစ်ရုံးကို ဗုံးကြဲမယ် အမြောက်နဲ့ပစ်မယ် ဆိုတဲ့ ဆိုက်ဝါးကြောင့် ပြည်သူလူထုအတွင်းသာမက စစ်တပ်တွင်းမှာပါ အတော်ကြီးကို လှုပ်လှုပ် ခတ်ခတ် ဖြစ်သွားတယ်။
လူထုတွေ မခံမရပ်နိုင်ဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲပြီးလမ်းပေါ် ထွက်လာတယ်။
(ရေတပ်၊လေတပ် သတင်းကိုထုတ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကိုသန်းနိုင်(ပုဂံ) ဆိုတာက ရေတပ် အရာခံဗိုလ် တင်ညွန့် ရဲ့သား တပ်ထဲမှာကြီးလာတာ၊ တပ်အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်)
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကိုးလေးလုံးကိစ္စ၊ မကြာသေးခင်အတွင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်လှုပ်ရှားမှုကိစ္စတွေ အလိုလိုတိမ်မြုပ် သွားတာကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ အခြေအနေ အချက်အလက်မပြည့်စုံဘဲ ဆန္ဒကိုဦးစားပေး လုပ်တဲ့ရလဒ်တွေပါပဲ။ ခုကိစ္စက ပိုဆိုးတယ်။
ခုလိုတပ်လှန့်လိုက်တော့ တပ်ထဲက တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက် ဘောင်ကျဉ်းသွားတယ်။
တကယ့်ကွန်ရက် အစစ်က တစ်နေရာမှာ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။
မျက်လုံးချင်းစကားပြောတာနဲ့ကို အကဲခတ်လို့ ရတယ်။
အရေးကြီးတာက ယုံကြည်မှုပြဿနာပဲ။ ယုံကြည်မှညီညွှတ်တာပါ။
ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတာက တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်အင်အားစုတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြားမှာ ရနိုင်သလောက်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ထားဖို့ပါပဲ။
အဲ့လိုမျိုး တကယ်ညီညွှတ်ကြပြီဆိုရင် ဦးသန်းရွှေမကလို့ သူ့နေရာမှာ သိကြာမင်း ဦးမာဃ ဆိုရင်တောင် သပ်လျှိုဖြိုခွဲ ဖို့မလွယ်ပါဘူး။
မညီမညွှတ်ဖြစ်နေသူတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း အုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတာကို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အထူးကျွမ်းကျင်ကြတယ်။
ညီညွှတ်မှာကိုသာ သူတို့ စိုးရိမ်တာ၊ ကြောက်တာ။ ခုချိန်မှာ ဦးသန်းရွှေ အာဏာမရှိတော့ ပေမယ့်၊ စစ်တပ်အပေါ်မှာ သြဇာအပြည့်ရှိနေတုန်း၊
ပြီးတော့ သူဟာတပ်မတော် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနက လာတာကိုမမေ့ကြဖို့ပါပဲ။
တိုင်းပြည်ရေးမို့ မနေနိုင်လို့သာ ရေးနေရတာ ကျနော့မှာလည်း နှစ်ဘက်ရန်ကရှိနေတယ်။ ခုလောလောဆယ် တောင်မှ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က နုတ်တွေမှာ comment ရေးလို့မရအောင် ပြုစားထားတယ်။
နောက်ဘာထပ်လုပ် မလဲဆိုတာမပြောနိုင်သေးဘူး။ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး။
ကိုယ်စေတနာသန့်ရင်၊ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံရင် လုပ်စရာတွေ၊ လုပ်ရမယ့်နေရာတွေ အများကြီးပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တဲ့သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံရဲရတာပါပဲ….။
TV ဆိုရင်ပြားရမယ်၊ ကြီးရမယ်ဆိုတဲ့ ဒုက္ခသည်
သြစတျေးလျနိုင်ငံကို နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရောက်လာကြတယ်။ ပြည်တွင်းကလည်း လာကြတယ်။ လေးငါးခြောက်လလောက်နေပြီးတော့ သူတို့က TV ဆိုရင် အပြားမှ။ ကြီးမှ ကြိုက်ကြတယ်။ Flat TV လို့ခေါ်တဲ့ TV အပြားက နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်တော့ သြစီက မြန်မာတွေ အိမ်တိုင်းနီးနီးရှိကြတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, April 23, 2011
မီဒီယာသမားအချို့ ဘာမှ နားမလည်ပါ (ကိုဇော်မင်း)
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, April 21, 2011
အမေရိကန်ရောက် ဥက္ကဌကိုသံခဲ (ABSDF) အကြောင်း
ဥက္ကဌကြီး ခဲ (ABSDF)
ABSDF ဥက္ကဌ ကိုသံခဲကို မနာလိုတောင်ဖြစ်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လိုလဲသိလား။ အမေရိကန်မှာ သူက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လိုမျိုး ဖြစ်နေလို့ဗျ.. သိလား။ အမေရိကလာဖို့အတွက် လမ်းစရိတ်ပေးတဲ့သူကပေး။ ဟို..အိမ်က ထမင်းဖိတ်ကျွေး၊ ဒီအိမ်က အရက်ခေါ်တိုက်နဲ့ လက်တောင်မလည်ဘူး။ နောက်ဆုံး မသွားနိုင်လို ငြင်းရတဲ့အထိ။
နောက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲ။ သွားရတဲ့ခရီးတွေဆိုတာလည်း နားရတယ်မရှိ။ တခါတလေ ကိုသံခဲက ဒီလိုငြီးတယ်တဲ့။
"မဲ့ဆောက်မှာပဲ ကောင်းတယ်ကွာ...။ ခရီးဝေးဝေးသွားစရာမလိုဘူး။ အမေရိကမှာ ခရီးတခုတခုနဲ့တအားဝေးတယ်။ ခေါင်းကိုက်တယ်။ မဲ့ဆောက်ပဲ ပြန်ချင်ပြီ"
အစည်းအဝေးတွေမှာဆိုရင် ကိုသံခဲက အရမ်းစွပ်ပွားတာကို ရဲဘော်ဟောင်းတွေက အရမ်းစွပ်ပြီးလေးစားလို့ အချင်းချင်းစကားများပြီး ထ,ထိုးရတဲ့အထိဗျာ။ ဒီလောက်ထိတောင် စကားပြောကောင်းတာ။
အမေရိကားမှာ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်တွေ၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ခရီးသွားရတာကို သူက တောင်ငြီးယူတဲ့အထိ။ ဒီလောက်တောင် ရောင်းကောင်းတဲ့ ကိုသံခဲ။ လက်တောင်မလည်ဘူး။ ရဲဘော်ရဲဖက်တွေကလည်း ချစ်လိုက်တာ တုန်လို့...ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် ကိုသံခဲရဲ့ နာမည်ရင်းကိုမခေါ်တော့ဘူး...။ ဥက္ကဌကြီး ခဲ, တဲ့ဗျာ။
ဒီလောက်ထိဖြစ်တာ မယုံမရှိနဲ့ဆရာ။နောက်ပြီး ပြည်သူချစ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကို ပရိတ်သတ်ကတွေ့ပြီဆိုရင် ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ ကိုသံခဲကို အမေရိကမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသူလေးတွေဆိုရင် အော်တိုရေးခိုင်းရတာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ရတာနဲ့။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို သြစတျေးလျက ကိုသံခဲရဲ့ ချစ်ဇနီးက မနာလိုတောင်ဖြစ်ရတယ်။
ဒီလောက်ထိလူချစ်လူခင်များတဲ့ ...လူဗျာ။ ရှားမရှား...။
နို့..နေပါအုံး။ ကျနော်တို့ လေးစားရတဲ့ ၈၈-မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်၊ ကိုအောင်မိုးဇော်၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ကြတော့ ကိုသံခဲလိုမျိုး ထမင်းကျွေးမဲ့လူ၊ ဖိတ်မဲ့လူ မတွေ့ပါလားဗျ။ ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲ။ ပြောကြပါအုံး။
အီးမေး ပက်စ်ဝက်တွေကို အမြဲပြောင်းကြပါ
A trouble maker for my Facebook could be in Near New York
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘွတ်ကို အမြဲလိုလို ပက်စ်ဝက်ပြောင်းကြပါ..နို့မဟုတ်ရင်တော့...ကျနော့်ဖေ့စ်ဘွတ်လို အနိုက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ နယူးယောက်က မသာမာသူလူတစ်ဦးက ဒီနေ့ပဲ ဒီလိုလုပ်ကြောင်း..ဖေ့စ်ဘွတ်မှ အသိပေးလာသောကြောင့် ဒီနေ့ပဲ ပက်စ်ဝက် ပြောင်းခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက မငယ်နိုင်ဘလောဂ့်၊ မဗေဒါ နှင့် ကျနော့်ဆိုက်ဒ်များတိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုရွှေလူချောက သတိပေးလာသည်။ များမကြာမီကျနော့်ဘလော့ဂ်ရှိစီဘောက်အား အားရပါးရဆဲဆိုထားသော စာများအားနေ့စဉ်လိုလိုတွေ့ရသည်။
ကျနော်ပဲ ဆဲ,တက်တယ်ထင်ထားတာ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ..ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးဆဲတဲ့လူနဲ့တွေ့မှ လေ,သွားတော့တယ်။ နောက်ဆုံးစီဘောက်ကို ဘလော့ဂ်မှာမထားရဲတော့တဲ့အထိဖြစ်တော့တယ်။ ဒီနေ့လည်း Facebook ကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ဘာလုပ်အုံးမလဲမသိ။ အခြားလူများ ဒီလူကိုသတိထားကြစေချင်ကြောင်း အသိပေးသည်။
Dear Tawwat Wat,
For more information, visit our Help Centre here:
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သြစတျေးလျတွင် ဆန္ဒပြခံရလေမည်လား
Perth မြို့ တွင်တွေ့ရသော ကြော်ငြာလက်ကမ်းစာရွက်
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ချစ်ကောင်း နဲ့ ချမ်းချမ်းတို့ရဲ့Live Concert ပွဲ့ကို သြစတျေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီနဲ့ Perth မြို့တို့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သည် သွားလေသူဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလှပြည့်နှင့်နီးစပ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း မီဒီယာများတွင်တွေ့ရှိရသောကြောင့် သြစတျေလျေးရောက်မြန်မာအချို့ မှ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ပွဲအား သွားရောက်ကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, April 20, 2011
ယခုလိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာကို လုံးဝထောက်ခံတယ်။ အားရတယ်။ အောက်ခြေရဲဘော်တွေကသာ တကယ်လက်ရဲဇက်ရဲဖြစ်တာမို့ နောက်ကွယ်ကထိန်းတဲ့လူကြီးများ အနေနဲ့နိုင်ငံရေး သတိများများ ရှိကြပါလို့ပြောချင်တယ်။ နိုင်ငံရေးသတိဆိုတာက ကိုယ်ဘာဘဲလုပ်လုပ် တိုင်းပြည်ရဲ့ အာဏာကိုပြည်သူ့လက်ထဲရောက်ရှိရေးနဲ့၊ တပ်မတော်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်ပေးရေးဖြစ်တယ်။ ဒါကိုအဓိကအာရုံစိုက်ပြီး သတိကြီးကြီးနဲ့လုပ်စေချင်တယ်။ ယခုလိုအကောင်အထည်ပေါ်အောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ လူတွေအားလုံးကို အထူးဂုဏ်ယူလေးစားကြောင်း အသိပေးပါသည်။ တနေ့တော့ တပ်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်တပ်သားများအားလုံး နှင့် မိသားစုဝင်များ ဒုက္ခတွေကြားကနေ လွှတ်ကင်းရစေမယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, April 18, 2011
"မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးရမယ်" အမယ်...တယ်လည်းမြင့်လှချည်လား။ သူတို့ပဲ တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်ခံ၊ အသက်သေခံ၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင် ဘာ့ကြောင့် ဒီစကားကိုပြောရတာလဲ မသိ။ တလွဲဖြစ်နေလားလို့။ အခုဟာသ အကန့်အသတ်နဲ့ တောင်းဆိုနေတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။
အနစ်ခံပြီးလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင် ဒီစကားပြောစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်က စွန့်လွှတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပဲ။ ဒါ့ကြောင့်ထောင်ထဲ ၀င်တာပဲ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့အကူညီတွေလည်း ဘာမှပေးစရာမလိုဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ပဲ အနစ်ခံ၊ စွန့်လွှတ်၊ အသက်ပဲသေသေ သေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ထောင်ထဲဝင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ တကယ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင် ဘာမှတောင်မပြောတော့ဘူး။ အင်း..လွဲပြန်ပြီ...ကျနော်လား၊ သူတို့လားမသိဘူး။
ပြီးတော့ ခင်ဗျားထောင်ထဲဝင်ရင် ကျနော်တို့ အနောက်ကနေ ထောက်ပံ့ပေးမယ်။ ဒါကိုသဘောကြလို့ ထောင်ထဲဝင်တာလည်းမဟုတ်။ သူငယ်ချင်းက အတင်းတိုက်တွန်းလို့၊ မိသားစုက ခိုင်းလို့၊ ငွေလိုချင်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလုပ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိတာကမှ ၂၀၀၀-ကျော်။ မြန်မာပြည်သူလူဦးရေက သန်းငါးဆယ်ကျော်။ ဘယ်ဟာက ပိုများလဲ။ ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးရမှာလဲ...? သူ့တို့ကိုလွှတ်ပေးမှ တိုင်းပြည်ပြသနာပြေလည်မယ်ဆိုလို့ပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြသနာက သူတို့ကို ဖမ်းထားတဲ့ပြသနာမှမဟုတ်တာ။
သူတို့ကိုမလွှတ်လည်း နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းလို့မရဘူးလား။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်မှဆိုတော့ သူတို့ကပဲ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့လူတွေကြနေတာပဲ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာကလည်း သူ့ဟာသူ ဖင်ယားပြီး အဖမ်းခံတာကိုး။ ထွက်ပြေးပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ့်ညံ့လို့ကိုယ်ခံရတာပဲ..။ တချို့ ပြည်ပက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်း ထွက်ပြေးလို့ ရောက်လာကြတာပဲ။ သိတယ်ဟုတ်။
ထောင်ထဲက ထွက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ ကိုတွေ့ဘူးတယ်။ အပြင်လောကနဲ့ အဆက်အသွယ်အကြာကြီးပြတ်တဲ့အပြင်၊ နှိပ်စက်ခံညှင်းပန်းခံများတော့ ခပ်ဂေါက်ဂေါက်။ တချို့ ဆိုရင် ရှုးကြောင်ကြောင်။ ဂီလာနဖြစ်တဲ့သူနဲ့။
ဒီလိုလူတွေကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့နေရာပေးလို့ကတော့ ဒုက္ခ။ စိတ်ကျန်းမာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီးထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော် လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။
တလွဲမတွေးနဲ့အုံးဆရာ...နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို စော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်/လေ။ (ဦးသုဝေလေသံဖြင့်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသာတွေကိုလွှတ်မှ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပက်သက်ပြီးစဉ်းစားမိလို့ပါ။ တခါတလေ သန်းငါးဆယ်သော ပြည်သူတွေကောင်းစားမယ်ဆိုရင် ငါးထောင်လောက်ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ရင်းသင့်ရင် ရင်းရမယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဦးစားပေးရင်၊ တိုင်းပြည်အတွက် တောထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်စွန့်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်း ဦးစားပေးရမှာပေါ့။ သူတို့နဲ့ပက်သက်တဲ့ သဘောထားတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပဲ အသက်ရှိတာမဟုတ်ပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, April 16, 2011
About social welfare in Libya
From Phone Hlaing
Do you believe it or not.
I read this in yahoo.
Something is wrong with libya.
Some other facts (that mainstream media will never tell you) about this "terrible dictator and blood sucking monster" Gaddafi who "terrorizes" his own people and Libya :
- If you'd be unable to get the employment the state would pay the full salary as if you were employed.
No wonder the US and other capitalist countries do not like Libya . Gaddafi would not consent to taking the IMF or World Bank credits at high interest rates. In other words Libya was INDEPENDENT! That is the real reason for war in Libya ! He may beadictator, but that is not the US problem.
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, April 15, 2011
ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးပါတီရဲ့ အတွင်းရေးမှုး ဦးငွေလင်းက ဒေါ်စုကို ဖောက်ထွက်ပါတဲ့...
"NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တပ်ဦးအခန်းကနေပြီးတော့မှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖေါက်ထွက်ပါ"
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး ဦးငွေလင်းရဲ့ ပြောစကားဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်ဒီမှာဖတ်ပါ...http://dpns-usa.blogspot.com/2011/04/blog-post_11.html#more
ဒီလိုပြောတဲ့ ဦးငွေလင်းကို သဘောကြကြောင်း အသိပေးပါသည်။ တကယ်တော့ NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဦးဝင်းတင်ပြောသလို ဖောက်ထွက်ရတော့မဲ့အချိန်ပါပဲ။ သို့ သော်....ဦးငွေလင်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖောက်ထွက်ပါဆိုတဲ့ အတိအကျကို မသိရဘူး။ ဘာကိုဖောက်ထွက်ရမှာလဲ။ အိမ်ကိုလား။ ထရံကိုလား။ အတိအကျ အများစုနားလည်အောင်ပြောပေးစေချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, April 13, 2011
အာဏာရှင်မှန်သမျှဘယ်တော့မှ သူတို့ရဲ့ အမှားတွေကို ၀န်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူတွေကများ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကို ၀န်ခံလို့လဲ။ အာဏာရှင်ကော၊ အာဏာမရှိတဲ့ အာဏာမရှင်ကော ဘယ်တော့မှ မိမိလုပ်ခဲ့တာကို မှားပါတယ်လို့ မပြောပါ။ ကဲ...တချက်လောက် လေ့လာကြည့်ပါ...။ ဘယ်သူတောင်းအာဏာရှင်က ငါ..လုပ်ခဲ့တာမှားတယ်လို့ပြောလဲ..။
အီဂျစ်သမ္မတ မှုဘာရက်ကိုကြည့်။ လစ်ဗျားသမ္မတ ကဒါဖီကိုကြည့်။ ပြီးတော့...အိုင်ဗရီကို့ စ်သမ္မတ လော့ရင့်ဘတ်ရဲ့ နမှုနာကိုကြည့်။ ဘယ်လောက်ခေါင်းမာတဲ့အာဏာရှင်တွေလဲ။ နောက်ဆုံးသူတို့ တကယ်အခက်အခဲအကျပ်အတည်းနဲ့ အသက်အန္တရာယ်ရှိတော့မှ အရှုံးပေးတယ်။ အဖမ်းခံတယ်။ ၀ိုင်းဖမ်း တော့မှ လက်နက်ချတယ်။ ဘယ်အာဏာရှင်က အတိုက်အခံနဲ့ အသာတကြည်ဆွေးနွေးပါမယ်လို့ပြောလဲ။ အီရတ်က ဆဒန်ဟူစိန်ကိုလည်းကြည့် အသတ်သာအသေခံသွားတယ်...ငါမှန်တယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ ဘယ်လောက် စောက်သုံးမကျတဲ့၊ ခေါင်းမာတဲ့လူမိုက်တွေလဲ။
မြန်မာပြည်ကဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေကိုလည်းကြည့်အုံး။ ဘယ်တုန်းကများ သူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေဝန်ခံခဲ့လဲ။ နောက်ရှိသေးတယ်။ ဦးနေ၀င်းလည်း ဘာထူးလဲ..။ တခါမှ သူမမှားခဲ့ဘူး။ သူမရက်စက်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုပဲပြောခဲ့တယ်။ ကဲ..ဒါတွေကို ကြည့်တော့...။
ဘယ်သူတောင်းစားအာဏာရှင်ကများ မိမိဟာ လူသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငွေတွေခိုးခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ သ ယံဇာတတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ ပါတယ်လို့ဝန်ခံလို့လဲ...။ သူတို့အားလုံးက ငါတို့လုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်ဆိုတာချည်းပဲ..။ ဒီတော့ အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေကို အပြစ်ပေးအရေးယူရမဲ့လူတွေကတော့ ပြည်သူတွေပဲ။ ပြည်သူတွေဟာ တရားဥပဒေနဲ့အညီ အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူတောင်းဆိုပေးရမဲ့တာဝန် လုံးလုံးရှိတယ်။ ဒီလိုလုပ်မှ အခြားသော အာဏာရှင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် စံနမှုဖြစ်မယ်။ နောင်မလုပ်ရဲမှာဖြစ်တယ်။
အခုကြည့် အရှေ့ အာဖရိကမှာရှိတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို အရေးယူဖို့လုပ်နေပြီ။ တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးဖို့ကျိုးစားနေပြီ။ သူတို့ခဗျာခံတောင်မခံရသေးဘူး၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်လို့ ဆေးရုံတက်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့။ သူတို့အလှည့်ကြတော့ တအားကြောက်တက်သားပဲ။ သူတို့နိုင်ငံတွေတောင် အာဏာရှင်တွေကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူပေးရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်က ဘုရာဒကာကျောင်းဒကာတွေကတော့ မိုက်တယ်။ သင်ပုန်းချေရေး၊ ခွင့်လွှတ်ပေးရေးတဲ့။ Shit...စောက်ရှုးတွေ။
အာဏာရှင်တွေဟာ အနည်းဆုံး တိုင်းပြည်ရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်။ မိသားစုအတွက် ခိုးတယ်။ ဒီလူတွေကို အပြစ်မပေးရင် ဘယ်သူတွေကို အပြစ်ပေးရမှာလဲ။ ပြည်သူတစ်ယောက်က လူသတ်မှုကျူးလွန်တော့ အပြစ်ပေးတယ်။ အာဏာရှိတဲ့လူတွေက လူသတ်မှုကျူးလွန်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါဆိုရင် ဘယ်တရားပါ့မလဲ။ ပြည်သူတစ်ဦးက သူများပစ္စည်းခိုးတော့ တရားဥပဒေအတိုင်း ထောင်ထဲထည့်တယ်။ အာဏာရှိတဲ့သူတစ်ဦးက အထုပ်ကြီးအထည်ကြီးနဲ့ ခိုးတာကြတော့ ထောင်ထဲမထည့်။ ဒါလား တရားဥပဒေ။ ဒါလား အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အနစ်နာခံသင်ပုန်းချေရမှာလား။
ဒီလို အနစ်နာခံမှ အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေးရမှာလား? ဒါဆိုရင် မရလဲနေကွာလို့...ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ..။
ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေဟာ စောက်ရှုးတွေ၊ ငကြောင်တွေပဲ။ ကိုယ်မှ တခါမှမခံရတော့ဘုရား စကားနဲ့လာပြောနေသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာတွေဟာ စောက်တလွဲတွေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ တကယ်ခံရတဲ့ ကာယကံရှင်တွေက ကျနော်ကျမတို့ရဲ့ သားတွေသမီးတွေကို သတ်ခဲ့၊ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့ လူတွေကို သင်ပုန်းချေပါတယ်လို့ ပြောရင်တော့ တမျိုးပေါ့...။ အခုဟာကသူကပဲ တကယ်ခံရသလို...။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်တဲ့...။ ဟင့်..သေလိုက်ပါတော့ ငကြောင်ရယ်..။
ဘယ့်တော့မှအာဏာရှင်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ နောင်လည်းခွင့်မလွှတ်ဘူး။ အခုလည်းခွင့်မလွှတ်ဘူး။ တရားဥပဒေအရ လုံးဝကိုအရေးယူရမယ်။ တကယ်လို့ စစ်အာဏာရှင်တွေ သတ်ခဲ့၊ ခိုးခဲ့၊ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့ ငါ-ိုးမသားများ... မင်းတို့..သားသမီးတွေကိုမုဒိမ်းကျင့်ခံ..အသတ်ခံရရင် ဒီလိုစကားမျိုးထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။
မီဒီယာတွေအားလုံး ဒီလိုကိစ္စတွေကို မီဒီယာမှာတင်တဲ့အခါ တကယ်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေကို ဦးစားပေးမေးမြန်းကြပါ..။ အလုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ် မထားကြနဲ့...။ ဒီကိစ္စက ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေ မိမိခံစားချက်ကို ပြောရမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ နှမစောင်း နိုင်ငံရေးသမားစောက်ရှုးတွေ တလွဲတွေးပြီး ဆွေးနွေးရမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အားလုံးသဘောပေါက်ကြပါ။
ဒီကိစ္စက စာသင်ခန်းထဲမှာ Brainstorming လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွ...။
မှတ်ချက်။ ။ မတ်လ (၆) ရက်နေ့ ညပိုင်း ဘီဘီစီမှ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအား နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံးတင်ရေးမတင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲအား နားထောင်မိ၍ ယခုလိုရေးသည်။
ထိုင်းအစိုးရက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့နိုင်ရေးကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထိုင်းက ပြန်ပို့ချင်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီလိုပြောလာတာခဏခဏပါပဲ။ တခါမှတော့အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ပါ။
ယနေ့ကာလမှာတော့ ဖြစ်နိုင်ဖို့များလာပါပြီ။ ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ မြန်မာအစိုးရသစ်ကလည်း သူ့လက်ထက်မှာတချို့ သောလိုက်လျှောမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအကြားမှာ တခါတလေတော့ မျက်နှာကောင်းလိုချင်နေတဲ့ပုံပါ။ အခုတောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်က ပြောနေပြီမဟုတ်လား။ ဒီအချိန်မှာပဲ မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ တိုက်ဆိုင်မှုတွေတော့မဟုတ်ပါ။ တစုံတခုတော့ လျှော့လာမဲပုံပဲ။
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေဟာ ထိုင်း၊ မလေးရှားအပါအ၀င်နိုင်ငံအတော်များများမှာရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သလို၊ UN နဲ့ တတိယနိုင်ငံတွေလည်းခေါင်းစားနေရပါတယ်။ သူတို့ကလည်း မြန်မာအစိုးသစ်ရဲ့ သဘောထားအတိုင်းလုပ်မှာပါ။ အကယ်၍ မြန်မာအစိုးရသာ သဘောတူခဲ့ရင် မြန်မာဒုက္ခသည်တွေလုံးဝ အိမ်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေကြောင့် ဘန်ကောက်က UN မှာ မြန်မာဒုက္ခသည်လျှောက်လွှာတွေကို လုံးဝဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ အသစ်တင်လို့မရပါ။ ဒုက္ခသည်တွေကလည်း လျှော့သွားတယ်မရှိ။ တိုးလာတာပဲရှိပါတယ်။
လူအမျိုးမျိုးတွေက ပုံစံအမျိုးအမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ ယူဆချက်ကလည်း ကွဲပြားနိုင်တယ်။
ကျနော်ကတော့ ကောင်းတယ်လို့ယူဆတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် လုံးဝကောင်းပါတယ်။ ဒါမှထိုင်းနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာ အနှိမ်ခံရသလိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ နိုင်ငံရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်တာက ပိုပြီးဂုဏ်ရှိတယ်။
သို့သော်တချို့ ကတော့ အမေရိကန်အပါအ၀င်တတိယနိုင်ငံတွေကို ထွက်ဖို့ကျိုးစားနေတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်ပြန်ချင်ပါ့မလဲ။ အများစုကတော့ ပြန်ချင်ကြမယ်လို့မျှောင့်လင့်ရပါတယ်။
နောက်ပြီး...ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်ကော၊ မြန်မာအတိုက်အခံတွေအားလုံးကိုပါ ပြန်ပို့စေချင်တယ်။ ဒါမှ ဒီလူတွေ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ နိုင်ငံရေးထဲရောက်မှာပါ။ မြန်မာအစိုးရသစ်အနေနဲ့ ထိုင်းအစိုးရက ကမ်းလှမ်းတာကို လက်ခံစေချင်ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရလိုပဲ၊ မလေးရှားအစိုးရလည်း ပြန်ပို့ချင်တဲ့သဘောထားရှိပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာဒုက္ခသည်ဦးရေ သိန်းချီရှိနေတဲ့ကိစ္စဟာလည်း မလေးတွေအတော်ခေါင်းကိုက်ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလေးနဲ့ ထိုင်းအစိုးရက ပြန်ပို့ရင်တော့ ပြန်ကြဟေ့. ..လို့ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ထိုင်းအစိုးရလက်ထဲမှာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းရှိတယ်
ထိုင်းအစိုးရရဲ့ လက်ထဲမှာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကို Pre-Creening လို့ခေါ်တယ်။ ဒီမှတ်တမ်းကတော့ UNHCR ကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရသေးခင်ကာလမှာ ထိုင်းကလူစစ်တဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်။ စခန်းထဲကို ၀င်လာတဲ့လူတွေမှန်သမျှကို ဒီပုံစံအတိုင်းလူစစ်တယ်။ ဆိုတော့ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ လက်ထဲမှာ စခန်းထဲက လူအရေအတွက် အတိအကျရှိတယ်။ အကယ်၍ မြန်မာအစိုးရနဲ့ သဘောတူညီချက်ရကြည့် မှတ်တမ်းတွေအားလုံး ထိုင်းအစိုးရက မြန်မာအစိုးရကို လွှဲပေးနိုင်တယ်။ လွှဲပေးတဲ့အခါမှာ တကယ့်နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် လုံးဝအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ သတိကြီးကြီးထားကြပေါ့။
မြန်မာအစိုးရအတွက်ကံကောင်းတာက မှတ်တမ်းတွေရပြီဆိုရင် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို နေရာပြန်လည်ချထားရေး အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့...ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေစခန်းတွေလိုအကွက်ရိုက်၊ တဲထိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်လောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် UNHCR နဲ့ နိုင်ငံတကာအန်ဂျီအိုတွေက လုံးဝအကူအညီပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်။ အဓိက လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပဲဖြစ်တယ်။ အချိန်ကာလတခုအထိပဲ ကူညီပေးပါတယ်။ ဥပမာ ၆-လနဲ့တစ်နှစ်အကြားဖြစ်တယ်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကလည်း အများအားဖြင့် တတိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ၀င်ရောက်နေထိုင်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ ဒီလောက်ဒုက္ခခံပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ ဘယ်သူမှမနေချင်ပါဘူး။ စခန်းထဲမှာနေရတဲ့ဘ၀က ထောင်ကျတာနဲ့သိတ်မကွာဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒုက္ခသည်အတော်များများရဲ့ ဘ၀ဟာ အတော်ကျပ်တည်းလှတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျစရာကောင်းတယ်။ လူ့ဘ၀မှာရှိတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို မခံစားရဘူး။ တကယ်လို့သာ မြန်မာအစိုးရက စေတနာအမှန်နဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင် အရမ်းကောင်းမယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နေရတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမ၀င်နေရတာထက်စာရင် ပိုပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတာပေါ့။ ဒါက ထိုင်းနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့ အခြေအနေပဲ။
လုံခြုံရေးနဲ့ပက်သက်လို့ကတော့ အဓိကနှစ်ခုပဲကွဲသွားနိုင်တယ်။ တစ်ခုက တကယ်ပြန်ရင် မဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေ။ သူတို့ကို သီးခြားခွဲထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ အရင်တုန်းက လုပ်သလို ဘန်ကောက်က မနီလွိုင်ကန့်လိုမျိုးမှာ သီးခြားထားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍မြန်မာအစိုးရက လက်မခံခဲ့ရင်ပေါ့။ ပြန်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်တဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်၊ နိုင်ငံခြားသွားချင်လို့ UN လျှောက်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ ပြန်ပို့တဲ့အထဲမှာပါနိုင်တယ်။
ဒုက္ခသည်အရောင်းအ၀ယ် နှင့် မှောင်ခိုဈေးကွက်
ဒုက္ခသည်ဈေးကွက်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်းမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်လာနေပြီ။ ဥပမာ မလေးရှားမှာဆိုရင် UN ကတ်ရဲ့ ဈေးနှုံးက မလေးရင်းဂစ် ငါးထောင်အနည်းဆုံးပေါက်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေစခန်းထဲမှာလည်း မလေးရှားလိုမှောင်ခိုဈေးနှုံးကောင်းတယ်။ စခန်းထဲထိစာရင်းပေါက်ကို ထိုင်းဘတ်ငွေ သောင်းချီပေးနေရတယ်။ မှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်လာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ အမေရိကန်အပါအ၀င် တတိယနိုင်ငံတွေကို ထွက်ခွာနိုင်ရေးဖြစ်လို့ပဲ။ ဒီမှောင်ခိုဈေးကွက်ကိုအဓိကချယ်လှယ်တဲ့လူတွေထဲမှာ UNHCR က စကားပြန်တွေ၊ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ စခန်းအာဏာပိုင်တွေ၊ စခန်းကော်မတီဝင်တွေ၊ သံရုံးတွေက စကားပြန်တွေပါဝင်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ တကယ်တမ်းအားမနာတမ်းပြောရရင် ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ဒုက္ခသည်မဟုတ်တော့ဘူး။ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေပဲ အစစ်အမှန်ရှိတော့တယ်။ ကျန်တဲ့အများစုကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အတွက် လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်အခြေအနေတွေလိုပဲ အခြားနိုင်ငံတွေက ဒုက္ခသည်တွေလည်း မှောင်ခိုဈေးကွက်လိမ်နည်းတွေရှိတယ်။ ဥပမာ အာဖဂန်၊ အီရက်၊ အီရန်စတဲ့ နိုင်ငံကလူတွေဆိုရင် သြစတျေးလျနိုင်ငံကို ၀င်ဖို့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားအထိ ငွေပေးပြီးလာကြတယ်။ ဒေါ်လာသောင်းဂဏန်းအထိ ဈေးပေါက်တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားအထိအရောက်ပို့ပေးရေးအတွက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကို သြစတျေးလျ TV မှာ အမြဲတမ်းလိုလိုတွေ့ရတယ်။ သြစတျေးလျအစိုးရရဲ့ နှစ်စဉ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အသုံးစရိတ် ဒေါ်လာ သန်းနှစ်ထောင်ကျော်ကုန်တယ်။ ခိုလှိုခွင့်တောင်းခံတဲ့လူတွေကလည်း အငြိမ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ တခါတလေ ဆန္ဒပြလိုက်၊ မီးရှို့ လိုက်၊ စခန်းတွေကို ရိုက်ချိုးလိုက်ဆိုတော့ သြစီတွေလည်း ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အတော်တင်းနေပါတယ်။ ဒါက သြစီဥပမာတစ်ခုပါ။ သြစီလိုပဲ အမေရိကန်နဲ့ အခြားချမ်းသာတဲ့တတိယနိုင်ငံတွေလည်း ခေါင်းကိုက်ရတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့က ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ရေးကိုပဲ အဓိကလိုချင်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာချင်တဲ့လူတွေမှန်သမျှ တရားဝင်ပြန်လာလို့ရအောင် ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ သို့ မဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာတွေ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလိုဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ ဟိုလည်းကူးမရ၊ ဒီလည်းကူးမရ ဒုက္ခပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ပြုတ်ကျကုန်ပါတော့မယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, April 12, 2011
အသက် ၁၉-နှစ်မှာ ...ကျနော်တို့တွေ..မတရားဘူးထင်လို့ ...AK 47 ကိုကိုင်ပြီးပြီးတော်လှန်ခဲ့တယ်။ မျှစ်စားပြီး၊ လစာမရပဲ လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။
ယနေ့အထိ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူး။ ငတ်ပြတ်ခဲ့ရတယ်။ အသက်တွေပေးခဲ့ရတယ်။ ဒုက္ခိတတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့လို့လည်းပဲ နအဖက ရဲဘော်တွေလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်။
ကျနော်တော်လှန်ရေးမလုပ်ချင်တော့လို့...သြစတျေးလျမှာ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဗမာအချင်းချင်း ကျနော်မတိုက်ချင်တော့ဘူး။ တိုက်လည်း အလကားပဲ။
နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ချက်က ဘယ်သူတွေအမြတ်ရလဲဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်းတွေပဲ ရတယ်။ သူတို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတယ်။ ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေဆင်းရဲရတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေက နအဖမှာကော၊ သူပုန်တွေမှာကော ဖြစ်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မတိုက်ကြနဲ့တော့...။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, April 06, 2011
အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီ။ ဒီအစိုးရသစ်ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အ၀တ်အစားပြောင်းလဲတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ လူတွေက ဒီလူတွေပဲ။ Night Club သွားရင်ဘောင်းဘီဝတ်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်သွားရင် ပုဆိုးနဲ့တိုက်ပုံဝတ်တယ်။ အချိန်နဲ့နေရာပေါ်မှုတည်ပြီး အ၀တ်အစားပြောင်းတယ်။ အခုအစိုးရသစ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ဒါကိုလူတိုင်းသိတယ်။ အထင်ကြီးစရာမရှိ။ အပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာမရှိ။ ဒါက နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအတွက် အပြောင်းအလဲမရှိတဲ့ပုံ။ သို့သော် အတိုက်အခံတော့အပြောင်းအလဲရှိတယ်။
"ဦးညဏ်ဝင်းကတော့ အရှိကိုအရှိတိုင်းအသိအမှတ်ပြုတယ်" တဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "အစိုးရသစ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်" တဲ့။ ပြည်ပအတိုက်အခံကတော့ "၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အစိုးရသစ်ကို တိုက်ဖျက်ရမယ်" တဲ့။ အမေရိကန်အခြေစိုက် ၈၈-ကျောင်းသားဟောင်းတစ်စုက " မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ တပ်တွေဝင်သင့်ပြီ" တဲ့။ ရန်ကုန်က နိုင်ငံရေးမလုပ်၊ နားမလည်တဲ့ ကျနော်သူငယ်ချင်းက " အစိုးရပြောင်းသွားပြီ၊ မင်းပြန်လာတော့" တဲ့ ။ ဒါကတော့ သူတို့အားလုံးက အစိုးရသစ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သဘောထား၊ အမြင်တွေပေါ့။
အဓိကအတိုက်အခံ NLD သေသွားပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်တယ်။ မနားရဘူး။ ဟိုသံရုံးလာလိုက်၊ တွေ့လိုက်။ ဒီသံရုံးလာလိုက် တွေ့လိုက်။ ဟိုမီဒီယာလာလိုက် ပွားလိုက်။ အာ,လိုက်။ သာရေးနာရေးသွားလိုက်။ Video မက်ဆေ့ပို့လိုက်၊ တယ်လီဖုန်းနဲ့ အစည်းအဝေးတက်လိုက်။ ဒါတွေနဲ့ ဒေါ်စုအလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ဒီပဲယင်းမဖြစ်ခင်တုန်းကလို လူထုတရားပွဲလေးများလုပ်ဖို့ သတိမရတော့ဘူးလားမသိ။ ဒီပဲယင်းမှာ အရိုက်ခံရလို့ တအားကြောက်သွားလား မသိတော့ဘူး။
ဒီလုပ်ငန်းတွေပဲ ဆက်လက်လုပ်နေအုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့များမှ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရမလဲမသိ။
တက်ကြွသတ္တိရှိတဲ့ အင်အားစုတစ်ရပ် ပြည်တွင်းမှာမရှိတော့ပါ
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့ရှိတုန်းက နေ့တိုင်းလိုလို လူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာအောင် လုပ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ မီးပွိုင့်မှာ အော်လိုက်။ စာကပ်လိုက်နဲ့။ သူတို့လည်း မရှိကော လူထုတွေအုံကြွလာအောင် ဘယ်သူမှ တကယ့်လက်တွေ့မလုပ်တော့သလိုပါလား။
NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာအောင်သာ အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းရ မလိုဖြစ် နေပြီ။ သူတို့မှမလုပ်ရင် အခုလက်ရှိအနေအထားအရ တက်ကြွသတ္တိရှိတဲ့အင်အားစု တစ်ရပ်မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
၁၉၉၀-ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်လား။ သနားတယ်။ စကားထဲထည့်တောင်မပြောနဲ့ တော့။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလား လုံးဝမရ။ လက်ရှိနအဖခင်းထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်ရင်လျှောက် မလျှောက်ရင် သေဖို့သာပြင်တော့။ ဒီတော့ နအဖလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလျှောက်ချင်တဲ့ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးတောင်းဆိုနေရုံသက်သက်နဲ့ ဘယ်တော့မှ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရလိမ့်မည်မဟုတ်။ မိမိအာဏာရှိရင်တော့ ဒါတွေကို ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အာဏာရအောင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်တော့ NLD ဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့ စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ကျန်ခဲ့တော့မယ်။
ကျက်တွေအစာကောက်သလို ဟိုတစ်စဒီတစ်စနဲ့ အောင်မြင်မှုအကောင်အထည်တခုမှမမြင်ရသေးဘူး။ အားလုံစုပြီး တခုတည်းသော စီမံကိန်း (သို့) မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရင်မကောင်းဘူးလား။ ပြည်ပနေ လူထုအုံကြွမှု ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်တယ်ပဲထားအုံး။ ဘယ်တော့မှ လူထုတွေအုံကြွမှာလဲ။ ပြီးတော့ ကိုယ်က အပြင်မှာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ့်လက်တွေ့ ပြည်တွင်းကို ၀င်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်တော့ တပိုင်းပေါ့။ အဝေးကနေ လုပ်တာလောက်နဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်။
ပြည်ပက အင်အားစုတွေစီမံကိန်းတခု(သို့)မဟာဗျူတခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရတော့မယ်။ ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ရေးကိစ္စကို ပြည်ပက အင်အားစုအားလုံးသာ စုစုစည်းစည်းနဲ့ လုပ်ကြည့်။ မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။ အထောက်အထားစုတဲ့သူကစု၊ သံရုံတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအရှေ့ တွေမှာအော်တဲ့သူကအော်၊ လောဘီလုပ်တဲ့သူကလုပ်၊ အီမေးပို့တဲ့သူကပို့...စသဖြင့်။ ဒီလိုမျိုး အားလုံးသောပြည်ပအတိုက်အခံအင်အားစုအားလုံးက စုစုစည်းစည်းနဲ့ ဒီလိုအလုပ်တခုကိုသာဇောင်းပေးလုပ်ကြည့်။ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ အချိန်ကာလတခုအထိပဲလုပ်။ မအောင်မြင်တော့ နောက်စီမံကိန်းပြောင်းပေါ့။ ဒါက စီမံကိန်းတခုပဲရှိသေးတယ်။ စီမံကိန်းတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ ဥပမာ...(၁) ပြည်ပအတိုက်အခံတွေ တနှစ်အတွင်းမြန်မာသံရုံးများ နှင်ထုတ်ခံရရေး။ (၂) လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ (၆) လအတွင်း မြ၀တီနဲ့ သုံးဆူကိုအပိုင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရေး။ ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကို အားလုံးတစုတစည်းတည်း လုပ်ကြည့်ဖို့ကိုပြောနေတာပါ။
အခုမြင်နေရတဲ့ ပြည်ပအတိုက်အခံလုပ်တဲ့အလုပ်က ပြန့်ကျဲပြီးစုစည်းလို့မရတဲ့ မဟာဗျူဟာကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ ဟိုအဖွဲ့က၊ လူ့အခွင့်ရေး၊ ဒီအဖွဲ့က ယူဂျီ၊ ဟိုအဖွဲ့က စစ်တိုက်နဲ့ဆိုတော့ ဘာကိုဦးတည်ပြီး အမြတ်ယူမှာလဲမသိ။ စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးတော့ဟုတ်တာပေါ့။ ဒီစစ်အာဏာရှင်ကလည်း ဘယ်တော့ပြုတ်ကြမှာလဲမသိဘူး။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့အားလုံး စီမံကိန်း (Project) ကိုတခုပြီးမှ တခုလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ ။ တပြိုင်တည်းလေဗျာ။ ဘာကအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ ကိုယ်ကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုတာနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားကြပေါ့။ Branstorming!!!!!
နောက် ငါးနှစ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုထပ်လာမယ်။ ပါတီတွေအားလုံးထပ်ပြိုင်မယ်။ ကြံ့ဖွံ့ ကြီးပဲ နိုင်မယ်။ သူတို့ပဲအာဏာရမယ်။ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘ၀တွေကိုထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်ကြရမယ်။ ဒါက အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ဟောကိန်းပဲ။ ဒီအစိုးရနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်အုံးမှာလဲ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေက လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ သူတို့ခင်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်မှာလား? ကန့်လန့်လျှောက်မှာလား?။
ဘယ်လိုပဲလျှောက်လျှောက်...ကျနော်တို့လိုချင်တာက ပြည်တွင်းစစ်မရှိ၊ လွတ်လပ်ဖွံ့ ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်ပဲ။ ဒီတော့ ဒီအချိန်မှာ ပြတ်သားဖို့လိုအပ်နေပြီ။ နအဖနဲ့ပေါင်းမလား။ ဒီလိုပဲ ဆက်သွားနေအုံးမှာလား။ ဘယ်တော့မှ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မှာလဲ။ နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ထိစောင့်မှာလား?။ အားလုံးပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်နေတာတော့သေချာတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်မှာအား,မရှိရင် ဘာမှလုပ်လို့မရ။ ပြောပါများရင် ဒီကောင်အရှုးလို့ သတ်မှတ်ခံရတာပဲ ရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ကတော့ အထက်ကပြောတဲ့ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးတင်ရေးကိစ္စကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။ သမိုင်းတလျှောက်မှာ တခါလောက်တော့ သူတို့လည်ပင်းကြိုးဂွင်းစွပ်တာကို မြင်ချင်တယ်။ သက်သေခံမဲ့ ဗိုလ်မှုး ဦးအောင်လင်းထွတ်လည်း အဆင်သင့်ရှိနေပြီပဲ။
ကဲ...ပြည်ပက ရဲဘော်တို့ ၀ိုင်းပြီးအာ,ကြပါစို....။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, April 02, 2011
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သြစတျေးလျတွင် ဆန္ဒပြခံရလေမည်လ...
ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးပါတီရဲ့ အတွင်းရေးမှုး ဦးငွေလင...